Jose Mourinho oo sheegay sababtii uu ugu safray dalka Croatia – Gool FM
Jose Mourinho oo sheegay sababtii uu ugu safray dalka Croatia
(Euroep) 25 Mar 2017. Jose Mourinho ayaa u safray dalka Croatia isagoo daawaday kulankii ay la yeesheen xulka Ukraine taa oo dhalisay qiyaas fikradeed ah inuu halkaa u aaday si u soo indho indheeyo xiddigo uu doonayo inuu la soo wareego.
Laakiin Jose ayaa sheegay inaysan jirin wax sababo ah oo ku hoos duugan booqashadiisa Croatia isla markaana uu halkaa u aaday inuu ku soo dalxiiso.
Ivan Rakitic iyo Ivan Perisic ayaa lala xiriirinayay inay u soo dhaqaaqaan Old Trafford iyadoo ay goal warisay jimcihii in xiddiga Inter Milan uu ku kacayo 40-milyan oo bound.
“Ma jiro sababo aan qiranayo, waxaan halkan u imid uun inaan ku raaxeysto maalmaheyga fasaxa aana booqdo saaxiibo sida Predrag Mijatovic iyo Davor Sukerm,” Jose ayaa sidaa u sheegay HNTV.
“Waan ogahay inuu qofkasta aaminsan yahay inaan halkan u imid inaan ciyaartooy daawado, laakiin kubbada cagta maanta uma baahnid inaad safarto si aad u soo aragto ciyaartooy, si fiican ayaan u garanayaa dhammaan.”
Jose ayaa intaa hadalkiisa ku sii daray:
“Sida shaqsi ahaan ayaan u imid kaa oo doonaya inuu ku nasto kuna raaxeysto jawiga fiican,”.
Tababarihii hore ee Chelsea ayaa dib shaqada ugu soo laaban doona 1-da bisha Abriil markaa ay kooxdiisa Man United oo ku jirta kaalinta 5-aad ay wajaheyso kooxda West Brom.
Diego Simeone oo sharaxaad ka bixiyay sababta uu ula soo saxiixaneyn wiilkiisa Giovanni Simeone oo wacdaro wayn ka dhigaya horyaalka Serie A
"Waxaan doonayaa inaan sii joogo PSG" - Marquinhos oo fariin cad u diray United iyo Barcelona